Zenziwa kanjani amabhodlela engilazi?
ngu admin ngo 20-04-29
Inqubo yokukhiqiza yamabhodlela engilazi ibandakanya ikakhulukazi: Phula izinto zokusetshenziswa ngobuningi bazo (isihlabathi se-quartz, umlotha we-soda, i-limestone, i-feldspar, njll.) Ukuze usule izinto ezingavuthiwe, futhi ususe izinto ezingavuthiwe ezine-iron ukuqinisekisa ikhwalithi yengilazi. ② Ukulungiselela ...
Ukhukhamba isitoreji sesikhathi eside noma ibhodlela lengilazi kufanelekile kakhulu
ngo admin ngo 19-12-11
Amabhodlela we-Pickle, ngombono wabantu abaningi uvame ukuphathwa ngebhodlela lokudla okungelona edolobhaneni. Esikhathini esedlule, ubumba lomhlabathi njengamabhodlela okugcotshwa kukhukhamba, luyadingeka emndenini ngamunye. Esikhathini samanje, ngesivinini esisheshayo sempilo, ukhukhamba luqale ukungena esitolo, ukungena ...
ngu admin ngo 19-12-10
I-Xuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD. yinkampani ekhiqiza ngokukhethekile esebenza ngobuciko bokukhiqiza amabhodlela engilazi, ubuchwepheshe bokusika, imikhiqizo ephezulu yengilazi eyindilinga. Le nkampani enamanzi ahamba kahle, umhlaba kanye nokuhamba komoya, eduze kwetheku laseLianyungang. Sine-5 okuzenzakalelayo ...
Umkhiqizo wethu oyinhloko
ngu admin ngo 19-12-09
Ifektri yethu ikhiqiza izinhlobo ezingaphezu kwezingu-800 eziphambili: Ibhodlela lengilazi lejamu, ibhodlela lengilazi lebhotela, ibhodlela le-soya, ibhodlela leviniga, ibhodlela lamafutha omnqumo, ibhodlela lamafutha, ibhodlela lewayini, ibhodlela lesiphuzo, ibhodlela lengilazi ibhodlela, ibhodlela lewayini lesithelo, ibhodlela lewayini lezempilo ...